Darpan Nepal – चिसोबाट कसरी बच्ने ? जाडो याममा के खाने ?
Dec 19, 2018Admin123Health0Like
हरेक वर्ष बदलिँदो मौसमसँगै हामीले आफ्नो जीवनशैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । ‘जाडो मौसम लागेसँगै सुप र झोलिलो खाने कुरा खान विज्ञहरुको सुझाव छ ।
यसो गर्नाले शरीर सुक्खा रहँदैन । टाउको दुख्ने, मुख सुक्खा हुने जस्ता चिसोले हुने समस्याबाट पनि बच्न सकिने बताइएको छ । जाडोमा झोल-तरकारी मीठो हुने हुनाले तरकारीको सेवन गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिइरहेका छन् ।
यसका साथै हामीले प्राय अदुवा हालेको चिया खाने गर्छौं । तर अदुवा चिया सेवन गर्दाको फाइदा हामी सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । जाडो मौसममा अदुवा हालेको चिया पिउनुको छुट्टै फाइदा छ । अदुवामा भिटामिन सी को मात्र उच्च हुन्छ भने म्याग्नेसियम र अन्य खनिज पनि पाइन्छ ।
अदुवाको जरा स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ । अदुवाको चिया बनाउँदा मह र कागती समेत मिलाउनु पर्छ । अदुवा चिया सेवन गर्दा यस्ता फाइदा छन्ः
१. रक्त सञ्चारमा सुधारः अदुवामा रहेको भिटामिन र खनिज एवं एमिनो एसिडले रक्त सञ्चारलाई राम्रो पार्छ र विभिन्न रोगको खतराबाट बचाउँछ । हृदयघात देखि अन्य मुटु सम्बन्धी समस्या समेत अदुवाको चियाबाट कम गर्न सकिन्छ ।
२. बान्त हुने र विरामी पर्नबाट बचाउँछः कुनै पनि यात्रा शुरु गर्नु अघि अदुवा हालेको चिया पिउँदा बाटोमा हुन सक्ने वान्त वा अन्य विमारी हुने समस्या आउँदैन । अलि अलि असजिलो महसुस भएको समयमा पनि अदुवा भएको चिया खानु उत्तम हुन्छ ।
३. रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा बृद्धीः अदुवाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ । अदुवाको चियामा उच्चस्तरको एन्टीअक्सीडेन्ट हुन्छ जसले रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ ।
४. दुखाइमा पनि औषधिः अदुवाले तपाइँको शरीरको कुनै भागमा भएका जलन वा दुखाइलाई पनि कम गर्छ । मांसपेसी र जोर्नीको दुखाइमा पनि अदुवाको सेवन सहायक हुन्छ ।
५. महिनाबारीको समाधानः अदुवाको चियाले महिलालाई हुने महिनाबारीको समस्या समाधान गरिदिन्छ । अदुवाको चिया तल्लो पेटमा लगाउँदा पनि यसले दुखाइ कम गर्छ । अदुवा चियामा मह मिसाउन सकेमा त्यसले झनै राम्रो गर्छ ।
६. पाचन प्रणालीमा सुधारः अदुवाले पाचन प्रणालीका क्रियाहरु सहज तुल्याउँछ । अधिक खानेकुरा सेवन गरेको समयमा पनि एक कप अदुवा भएको चिया खानु उपयुक्त हुन्छ ।
७. श्वाप्रश्वासको समस्यामा औषधिः अदुवाको चियाले श्वाप्रश्वासको समस्या हुनेलाई पनि लाभ गर्छ । चिसो लागेको समयमा एक कप अदुवा हालेको चिया लाभदायी हुन्छ । त्यसैगरी वातावरणीय एलर्जीलाई पनि निवारण गरिदिन्छ ।
Previous Postफलफुलका बोक्राका फाईदा यसप्रकार छन् Next Postठगी मुद्धाका फरार प्रतिवादी पक्राउ